Fitaovana hacking: Fitaovana fanapahana mahasoa ampiasaina amin'ny GNU / Linux | Avy amin'ny Linux
Manohy ny bokintsika avy amin'ny Lohahevitra fanapahana, anio dia hiresaka amin'ny antsipiriany bebe kokoa isika momba ny Fitaovana fanapahana. Mba hahavitana izany dia fantaro ny sasany amin'ireo malaza sy malaza indrindra fitaovana rindrambaiko noforonina ho an'ny tontolon'ny asa ataon'ny matihanina ary be fitiavana ny «Hacking & Pentesting ».
Ankoatr'izay dia marihina fa nilaza izany Fitaovana fanapahana dia azo ampiasaina amin'ny fomba tonga lafatra na ho an'ireo izay mampihatra izany "Hacking etika" ho an'ireo izay tsy manao.
Ho an'ity fanararaotana ity, ary alohan'ny hidirantsika tanteraka amin'ilay lohahevitra, dia avelanay eto ambany ny rohy vitsivitsy amin'ireo famoahana teo aloha mifandraika amin'ilay lohahevitra Fanapahana, amin'izay izay liana te hijery lalina ny lohahevitra dia afaka manao izany mora foana.
"Fa maninona no Hack amin'ny GNU / Linux? Satria fantatry ny besinimaro fa ny matihanina amin'ny sehatry ny "Hacking & Pentesting" dia aleony ny GNU / Linux noho ny Windows, MacOS na hafa, noho ny asany matihanina, satria, ankoatry ny zavatra maro dia manome fifehezana bebe kokoa amin'ny singa tsirairay izy izany. Ary koa, maninona no vita tsara sy tafiditra tsara manodidina ny Command Line Interface (CLI) anao, izany hoe ny terminal na console anao. Ankoatr'izay dia azo antoka sy mangarahara kokoa izy io satria maimaim-poana sy misokatra ary satria Windows / MacOS matetika dia tanjona kendrena manintona kokoa." Fijirihana etika: Fampiharana malalaka sy misokatra ho an'ny GNU / Linux Distro anao
1 Fitaovana fanapahana: Fitaovana fanapahana tsara indrindra amin'ny Linux
1.1 Fitaovana fanapahana 1: Metasploit
1.2 Fitaovana fanapahana 2: Tool-X
1.3 Fitaovana fanapahana 3: Onex
1.4 Fitaovana fanapahana 14 hafa
1.5 Rohy fanampiny momba ny Fitaovana fanapahana
Fitaovana fanapahana: Fitaovana fanapahana tsara indrindra amin'ny Linux
3 amin'ireo malaza indrindra, feno ary ampiasaina Fitaovana fanapahana matetika izy ireo no:
Fitaovana fanapahana 1: Metasploit
Heverina ho rafitra fitsapana fidirana be mpampiasa indrindra eto an-tany. Metasploit dia vokatry ny fiaraha-miasa eo amin'ny vondrom-piarahamonina open source y Haingana7. Manampy ny ekipa mpiambina ny manao mihoatra noho ny fizahana ny fahalemena, ny fitantanana ny tombana amin'ny fiarovana ary ny fanatsarana ny fahatsiarovan-tena amin'ny fiarovana; fiarovan-tena sy mpiaro ny sandry hijanona amin'ny dingana iray (na roa) eo alohan'izay.
Raha te hisintona, hametraka ary hampiasa dia mandehana manaraka ireto rohy. Ary ho fampahalalana fanampiny ity manaraka ity rohy.
Fitaovana fanapahana 2: Fitaovana-X
Izany dia mpanamboatra fitaovana hacking avy amin'ny Kali Linux. Fitaovana-X novolavolaina ho an'ny Termux ary ireo rafitra miasa hafa mifototra amin'ny Linux. Fitaovana-X azonao atao ny mametraka mihoatra ny Fitaovana fijirihana 370 momba ny Termux sy ny fizarana Linux isan-karazany, toy ny Ubuntu sy Debian, ankoatry ny maro hafa.
Raha te hisintona, hametraka ary hampiasa dia mandehana manaraka ireto rohy.
Fitaovana fanapahana 3: Onex
Mpitantana fonosana ho an'ireo mpijirika izy io. Onex mitantana fitaovana hacking mihoatra ny 370 izay azo apetraka amin'ny tsindry tokana. Ankoatr'izay dia fitaovana maivana sy haingana izy io, mitovy amin'ny Fitaovana-X, ka azo ampiasaina fa tsy Fitaovana-X.
Fitaovana fanapahana 14 hafa
Raha ny hafa Fitaovana fanapahana Mitovy ary mahasoa ihany koa dia:
EagleEye: Fitaovana enti-miasa momba ny haitao sosialy hahazoana vaovao amin'ny olona amin'ny Internet.
Fihetseham-po: Framework momba ny fitsapana penetration sy ny hacking tool Suite.
GoGhost: Fitaovana loharano misokatra mahomby ho an'ny fizahana SMBGhost goavambe.
HackingTool: Fitaovana fanapahana rehetra ho an'ny hackers.
Hacktronian: Fitaovana fanapahana rehetra azo ampiasaina amin'ny Linux sy Android.
Nexphisher: Fitaovana phishing mandroso ho an'ny Linux sy Termux.
Sigit: Fitaovana fanangonana fampahalalana tsotra.
SocialBox: Rafitra fanafihana mahery vaika ho an'ny tambajotra sosialy sasany.
SQLMap: Fitaovana fanindronana SQL mandeha ho azy sy fitaovana fanangonan-tahiry.
TEA - Ssh-Client Worm: Client Worm ssh vita amin'ny rafitra TAS.
TeleGram-Scraper: Fitaovana ahazoana vaovao avy amin'ireo mpampiasa vondrona Telegram.
UDork: Script fikarohana Google hahazoana fampahalalana saro-pady avy amin'ny rakitra na lahatahiry, ankoatry ny lahasa hafa.
Fitaovam-piadiana hacker an'ny tranonkala: Fitaovana milamina ampiasain'ny hackers Web.
Zphisher: Fitaovana phishing mandeha ho azy.
Rohy fanampiny momba ny Fitaovana fanapahana
Hanitatra ity lisitra kely an'ny Fitaovana fanapahana ary ireo mitovy aminy avy IT Security, izay matetika no hazo fijaliana na ho an'ny Windows sy Android, azonao atao ny mitsidika ireto rohy manaraka ireto:
Manantena izahay fa izany "lahatsoratra kely ilaina" momba ny sasany amin'ireo fitaovana rindrambaiko tsara indrindra sy malaza fantatra amin'ny anarana hoe «Hacking Tools», izay noforonina manokana ho an'ny tontolon'ny asa ataon'ny matihanina ary maniry mafy ny «Hacking & Pentesting »; dia liana sy ilaina lehibe, ho an'ny rehetra «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» ary fandraisana anjara lehibe amin'ny fanaparitahana ny tontolo iainana mahatalanjona sy goavambe ary mitombo «GNU/Linux».
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Fitaovana fanapahana: Fitaovana fanapahana mahasoa ampiasaina amin'ny GNU / Linux
manompo anay izy ireo dia hoy izy:
Ny fitaovana toy izany dia tsy misy ilana azy raha tsy hainao ny mampiasa azy ary raha tsy mifandray amin'ny fampianarana na boky torolalana na tsara kokoa ianao dia manome fampianarana an-tsipiriany momba azy ireo, satria tsy misy ilana azy ireo.
Miarahaba, Nosirve. Misaotra tamin'ny hevitrao. Manantena izahay fa afaka miatrika tsikelikely ny tsirairay amin'izy ireo mba hampitombo ny fampidinana, ny fametrahana ary ny fampiasana azy ireo. Na izany na tsy izany, misaotra betsaka noho ny sosokevitra tsara omenao.
Ubuntu 21.04 "Hirsute Hippo" dia miaraka amina fampiharana avy amin'ny Gnome 40, Wayland sy maro hafa